Somali/Soomaali | Refugee Center Online | Refugee Center Online
Rights and Laws|Somali/Soomaali
Madaxweyne Trump waxaa uusoo saaray amar madaxweyne ee labaad bishan Maarso 6, 2017. Amarkan madaxweyne waxaa uu badalayaa amarkii madaxweyne ee horay loo sameeyay bishi Janaayo ee isla sanadkan. Amarkan waxaa uu wax ka badalayaa barnaamijka dib udejinta qaxootiga ee dowlada Mareykanka. Bogan waxaa uu ka koobanyahay warbixin muhiim ah ee ku saabsan sida amarkan madaxweynaha uu usaameen doono qaxootiga. Muxuu amarka madaxweynaha uga turjumayaa qaxootiga?
Amar madaxweyne waa amar uu bixiyo madaxweynaha kaasoo loo daweeyo sida sharciga ah dalka Mareykanka ah. Maxaa yeelay, dib u dejinta qaxootiga waxaa kantaroola Madaxweynaha Mareykanka wax ayuu ka badali karaa barnaamijka dib udejinta. Si kastaba ha ahaatee, amarka madaxweynaha ma carqaladeen karo dastuurka ama shuruucda aay soo saaraan aqalka barlamaanka.
Amarka waxaa uu joojinayaa dib udejinta qaxootiga 120 ka maalmood ee soo socda. Taas macnaheedu waxa weeye in aan loo ogolaan doonin in qaxootiga dib u dajin oo dalka Mareykanka ah ee 120 maalmood ka bilaabata Maarso 6, ilaa iyo Julaayo 14, 2017.
Kadib 120 ka cisho qaxootigi xitaa horay loogu ansixiyay dib udejinta waxaa laga yaabaa in aay maraaan baaritaano dheeraad ah ee ku saabsan amniga si aay ugu sii qalmaan in aay imaadaan Mareykanka. Tani macnaheeda waxaa waaye in aay daahi doonaan baaritaanada dibada iyo imtixaanaadka. Amarka madaxweynaha waxaa kale oo uu mamnuucay dadka kasoo jeedaa lix wadan in aay soo galaan Mareykanka muda 90 cisho ah ka bilaabato Maarso 6- ilaa iyo Janaayo 14 keeda 2017. Wadamadaan waxaa ka mid ah Iran, Sudan, Syria, Libya, Somalia iyo Yemen. Dadka haaysto green kaarka ama kaarka cagaaran kuma jiraan dadkan lamamnuucay. Haddii adiga ama qof aad taqaanid loo xiro si sharci daro ah waa in aad la xiriirtid: airport@refugeerights.org ama aad wacdid xafiiska qareenada caalamiga ah ee magaaladaada ACLU. Sagaashan cisho kadib waxaa laga yaabaa in laga qaado mamnuucida dadka qaarkood. Haddii aadan haysanin green kaar ama kaarka cagaaran fadlan hau safrin wadanka Mareykanka banaankiisa. Haddii aay aay kugu noqoto arin deg deg ah in aad safartid oo aadna haysatid green card waxaa laga yaabaa in aad uqalantid cafis qaran laakin waa in aad ka codsatid safaaradaada . In qof ee qaxootiga ah ee dib udejin lasiin doono sanadkan waxaa waaye 50,000 oo qof meesha laga rabay in lasiiyo 110,000. Maadaama mar hore lasiiyay dib udejin ilaa iyo 35,000 oo qof taasi macnaheeda waxaa waaye in loo ogolaan doono 15,000 oo qof in aay soo galaan Mareykanka kadib Julaayo 14,2017. Qaxootigi loo qorsheeyay in aay Mareykanka soo galaan kahor bishan Maarso 6 deeda ee sanadkan waa loo ogolaanayaa inaay soo galaan wadanka.
Sidee buu ii sameyn doona amarka Madaxweynaha?
1. Hadii aad tahay qaxooti hore ujoogay dalka Mareykanka, amarkan kuma yeelanayo wax saameyn ah xaga sharcigaaga. Weli waxaad leedahay joogistaadi sharciyeesnayd. Waxaad dalban kartaa ama codsan kartaa kaarka cagaaraan ama Green cardka marka aad degnaatid wadanka hal sano.
2. Haddii aad sugaysid xubin qoyska ka mid ah in dib u dajin Maraykanka laga siiyo ama in aay kugu soo biiraan waxaa laga yaabaa in aay ku qaadato mudo dheer inta aaysan imaanin Mareykanka kahor. Haddii xubinta qoyskaaga uu kamid yahay dalalka laga mamnuucay inay soo galaan Maraykanka, looma ogolaan doono in ay yimaadaan Maraykanka ilaa amarka madaxweynaha labadalo. Ka waran hadii aad ubaahantahay caawinaad sharci ah?
Haddii aad qabto wax welwel ah oo sharci ah oo degdeg ah sababtoo ah EO ama aad leedahay xubno qoyskaaga kamid ah oo qaxooti ah oo qorsheeynaya in ay yimaadaan Mareykanka, waxaad la xiriiri kartaa Project Assistance Refugee International ka. IRAP ayaa kusiin karaan talo iyo warbixin, laakiin ma laha awood ay ku keeni karaan wadanka Mareykanka qof uu mamnuucay sharciga Madaxweynaha. info@refugeerights.org
Qaxooti ahaan waxaad soo martay marxalado aad uadag. Laakin waan ognaahay in aad xoog leedahay. Hada, waxaa jira 3 walxood oo aad sameyn kartid:
Xusuuso, in aad tahay xubin muhiim ah oo ka tirsan dalka Mareykanka. Waan ognahay in aad waxyaabo badan oo qiimo leh aad kusoo kordhisid wadankeena. Dadka Mareykanka intiisa badan waa usoo dhaweeyaa qaxootiga.
Hadii aad isleedahay amni ayaad haysataa fadlan nala wadaag sheekadaada. Xiligan la joogo, waa muhiim in dadka kale ee Mareykanka ah aay fahmaan maqlaana sheekooyinka qaxootiga.
Caawa dadka kale oo adiga camal ah. La wadaag macluuumaadkan ttps://therefugeecenter.org/
Hadii aadan hada ahayn wadani Mareykan ah oo aad wadankana joogtay in muda ah waa hada wakhtigi aad noqon lahayd wadani Mareykan ah. Waxaad ka qaadan kartaa fasalada laga barto imtixaanka baasaboorka ama imtixaanka lagu noqdo wadani Mareykan oo lacag la’aan ah bartan: http://classroom.therefugeecenter.org/programs/citizenship-preparation
Ka waran hadii aad tahay qof la jirdilay ama naceeb lala beegsaday?
Haddii aad tahay dhibane lala beegsaday dambi, waxaad wacdaa booliska: 911
Haddii aad ogtahay ama aad taqaanid qof lagu midibtakooray diintiisa ama koox uu ka tirsanyahay waa aad sheegtid: https://www.splcenter.org/reporthate
Ka waran hadii aad qabtid suaalo kale?
Haddii aad qabtid suaalo kale fadlan email udir RCO: info@therefugeecenter.org
Yaa udoodaya qaxootiga?
Wadanka Mareykanka waxaa jira urur caalami ah oo la dhaho Refugee Council USA kasoo la shaqeynaya maamulka si uu xaqiijiyo in lasii wadato dhaqanki qurxoonaa ee Mareykanka ee ku aadan dib udejinka qaxootiga inuu sii socdo. Ururo badan ayaa ka mid ah kooxahan oo aay kamid yihin dhamaan hay’adaha caalamiga ah ee dib udejinta. Ururadan iyo dadka mareykanka ah badankood waxaa aay kuligood utaaganyihiin qaxootiga.